सानिमा बैंकको शाखा महाराजगंजमा
सानिमा बैंकले काठमाडौंको महाराजगंजमा ४६ आंैै शाखा कार्यालय स्थापना गरी बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गरेको छ। उक्त शाखा कार्यालयको बैंकका ब्राण्ड प्रवद्र्धक कलाकारद्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले संयूक्त रुपमा उद्घाटन गरे।
समारोहमा बैंकका संचालक डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले देशका विभिन्न क्षेत्रमा पनि शाखा विस्तार गर्दै लैजाने उद्देश्य रहेको बताए। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई निरन्तर सहयोगका लागि कृतज्ञता व्यक्त गरे।
सानिमा बंैकको हाल मेची देखि महाकाली तथा सातै प्रदेशमा गरी ४६ वटा शाखा तथा ५३ वटा ए.टि.एम संचालनमा रहेका छन्। बैंकको पुँजीकोष १३ दशमलव २ प्रतिशत छ। सबैभन्दा न्यून ०. ०४ प्रतिशत मात्रै निश्क्रिय कर्जा रहेको छ। कर्जा निक्षेप अनुपात ७५ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २३, २०७४, ०३:२८:२४
प्रिमियममा आइपिओः शिवम् सिमेन्टको प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँ तय
ब्याजदर नबढ्ने भएपछि नेप्से हरियो
ब्याजदरमा फेरि ‘भद्र सहमति’
आठ अंकले झर्यो सेयर परिसूचक
नयाँ बीमा कम्पनी जनरल ईन्स्योरेन्सले कारोबार थाल्यो